Turjubaanadii Ingiriiska uga shaqaynayey Afghanistan oo la dayacay - BBC News Somali
Turjubaanadii Ingiriiska uga shaqaynayey Afghanistan oo la dayacay
Ciidamada Ingiriiska oo Afghanistan jooga
Koox xildhibaabo ah oo ka tirsan baarlamanka Ingiriiska ayaa sheegay in qorshe ay wadday xukuumaddu oo lagu doonayey in lagu ilaaliyo kumanaan Afghanistaniyiin ah oo turjubaano u ahaa ciidamada Ingiriiska ee ka hawl galay dalkaasi noqday mid si xun u guul darraystay.
Warbixin uu soo saaratay guddi hoosaadka baarlamanka dalkaas ee gaashaan dhiggu waxay ku sheegtay in in xataa ugu yaraan qof qudha oo turjubaan ah aan magangelyo laga siinin Ingiriiska tan iyo markii ay ciidamada ingiriisku soo af-jareen hawl galladii hubaysnaa ee ay ka wadeen Afghanistan sanadkii 2014-kii, xattaa hadii nolosha dadkaasi khatar ugu jirtay Talibanka oo qudha ka jara.
Warbixintu waxay ku baaqday in "hab naxariiseed" loola dhaqmo dadka naftooda halista u geliyey taageerada ciidamada Ingiriiska mudadii saddex iyo tobanka sanadood ee hawl gallada hubaysan Afghanistan ay ka wadeen ee gabogaboobay sanadkii 2014-kii.
Qiyaastii ku dhawaad 7000 qof oo rayid ah ayaa Afghanistan ugaga shaqaynayey ciidamada Ingiriiska turjubaannimo, waxaanay had halis geliyeen noloshooda.
Taliban oo weerar xooggan ku qaaday magaalo ku taalla galbeedka Afghanistan.
Afghanistan: Xarun lagu diiwaan galinayay codbixiyaal oo la qarxiyay
Afghanistan: Sarkaal sare oo ka tirsan daacish ayaanu dilnay
Haweenka Sacuudiga oo lacagta ugu badan ku bixiya make up-ka